Ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-enwetakwu ọrịa kansa? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Ọkpụkpụ cyclic - olee otu anyị si edozi
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-enwetakwu ọrịa kansa?
Ọmụmụ ihe ọhụrụ mere ka arụmụka na-aga n’ihu na-akpata nsogbu ahụike nke ịnya ịnyịnya ígwè maka ụmụ nwoke: Ndị nchọpụta chọpụtara nandị na-agba ígwèonye na-agba igweỌzọnwere ike ihu nsogbu dị elu nke prostatekansa, ma obughi oke ohere nke infertility or dysfunction erectile.Jul 18 2014
Lee - nke a bụ 'chi m! My amụ amụ kpamkpam! 'Anyị ga-alaghachi na nke a ka anyị na-enyocha okwu metụtara ahụike ụmụ nwoke na ịgba ịnyịnya ígwè ha. Iji mee nke a, anyị na otu n'ime ndị isi na-ahụ maka urologists na UK - nwoke aha ya bụ Anthony Koupparis - soro anyị rụọ ọrụ iji nye ndụmọdụ siri ike, nke bara uru nke ụmụ nwoke niile na-agba ịnyịnya ígwè kwesịrị ị listena ntị na mgbe ịchọrọ ihe kpatara ọzọ karịa ahụmịhe ahụike dị ukwuu iji kwenye ihe ọ na-ekwu ọ bụ nwoke nwoke ma ndị ikom a na-etinye oge dị ukwuu na sadulu. Tupu anyi amalite, obu ihe omumu omumu.
The perineum bụkwa n'ụlọ ka nnukwu arịa ọbara na gị pudendal akwara, nke na-enye mmetụta nke ebe ya mere na-enye aka na erection. N’elu perineum bụ prostate gị, gland nke na -emepụta seminal ọmụmụ na na gafere urethra. N'iburu anatomi anyị na ọdịdị nke ihe ahụ, ọ dị ka ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iji mee njikọ dị n'etiti ịgba ịnyịnya na ihe mgbu ma ọ bụ nhụjuanya, nrụrụ erectile na nsogbu prostate, mana ka anyị leruo ya anya.
Ma, echegbula. O nweghi ihe doro anya karịa ihe ị hụburu, ha tụrụ aro ka Anthony kwatuo okwu a. Yabụ anyị nwere ọnụọgụ, nrụrụ erectile yana ọrịa kansa prostate, ọkachasị kansa prostate.
nkata igwe kwụ otu ebe
Ọ dị m ka anyị matara onwe anyị nke ọma ịgwa m banyere ya. Ọ bụ mgbe m nọ n'ọdụ ụgbọ elu ikuku na Indianapolis na anyị na-eme nyocha oghere ikuku, n'ọnọdụ nke ị ga-eji nwayọ nọdụ na igwe kwụ otu ebe ruo nkeji iri atọ ka igwe kwụ otu ebe na-ekpochapụ ikuku ikuku. Ihe ọ pụtara Ọ ga-abụrịrị na ị naghị emegharị ahụ gị elu, n'ihi na ụdị nchagharị ọ bụla ga-agbagọ nsonaazụ ahụ.
Yabụ ọ bụrụ na ị nwere ọrịa shuga, ọbara mgbali elu, ma ọ bụ anwụrụ ọkụ, ikekwe ị nwere nrụrụ erectile, mana ị nwekwara ike ịrịa ọrịa obi. Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị toro eto ga-amalite ịgba ịnyịnya ígwè. Ọ bụrụ na ị bụ ugbu a onye na-agba ịnyịnya ígwè ma na ị nọ n'afọ ndụ ahụ na-etolite arụmọrụ erectile, ihe mbụ ị chere ekwesịghị ịbụ, 'Oh, nke a bụ sadulu m' naanị n'ihi ịgba ịnyịnya ígwè. 'Okwesiri ibu, Agaghị m lie isi m na ájá Nke a nwere ike ịbụ ihe na-egosi ihe na-emebeghị nchọpụta.
Nke mbụ, iji nweta MOT kwesịrị ekwesị site n'echiche obi, gịnịzi mere ị gaghị enwe ọgwụgwọ nrụrụ erectile? Ama m, okirikiri ezuola. O meela ka ọ bụrụ ihe na-adịghị ntakịrị ka ọ bụrụ ezigbo nsogbu ahụike na ị nwere ike ịhazi ya. Na mgbe ahụ ị ga-ahụ ha.
Kedụ banyere nsogbu metụtara prostate na ọrịa prostate ọkachasị. N'ụzọ dị mma, ịgba ịnyịnya ígwè enweghị mmetụta na ọrịa cancer prostate. Ma, ọ bụghị naanị otú ọrịa cancer na-esi amalite, ọ bụkwa ajụjụ ma à na-enyocha gị n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị maka ọrịa cancer prostate.
Otu n'ime ihe ndị anyị ji enye ihe ngosi nke ọrịa cancer prostate bụ ịnwale ọbara ma enwere echiche na ọ bụrụ na ị gbaa okirikiri ọtụtụ ị nwere ike iwe iwe prostate gị na nke a nwere ike ịbụ nyocha ọbara gị nke a na-akpọ PSA nke a na-akpọ ọbara na-eme ka elu dị elu. nwalee nnwale ọbara nke antigen kpọmkwem nke na-erute na ị mere nyocha ọbara ahụ ka ọ dị elu nke ọma wee nwee ọtụtụ ule ị na-achọghị mgbe ọ bụla n'ihi na ị na-agba ịnyịnya ibu na nke ahụ abụghị eziokwu, ọ bụghị ya - Enwere ohere ọ enwere ike imetụ gị ntakịrị, mana ọ bụrụ na ị lelee nyocha nyocha nke ụlọ nyocha na ọtụtụ, ọtụtụ akara akara mkpụrụ ndụ maka ọrịa kansa prostate, ịgba ígwè na mmega ahụ enweghị ihe dị iche na nke ọ bụla na-egosi ọrịa kansa prostate, yabụ ịgba ịnyịnya ígwè dị mma You na-akawanye mma, ọ meziwanye ahụike gị na obi ihe niile na - ebelata ohere ị nwere ịrịa kansa ma ọ naghị emetụta nyocha ọrịa kansa prostate na - ekwesịghị ekwesị. Ma na ọ na-aga n'ihu. N'ụzọ dị mma, ọ dịghị nnukwu ihe ize ndụ nke ọrịa cancer prostate.
Ihe anyị kwesịrị ime dị ka ụmụ okorobịa na-eche banyere ya. Yabụ ka anyị na-etolite, ohere nke ịrịa ọrịa cancer prostate dị elu. Ihe mbu ikwesiri ime ugbua bu ima ihe ufodu ihe mgbaàmà bu ugbua, ihe ndi anyi n’ele anya bu ihe dika ihe mgbaàmà banyere oru mmiri, mgbu azu, nsogbu igba obara n’ime mmiri, udi ihe ndia, ma oburu n’ichegbu onwe gi. ihe ndị a, ọ bụrụ na ị hụ ihe ndị a ọzọ Mgbe ahụ ị ga-agakwuru onye urologist ma ọ bụ dọkịta ezinụlọ gị ma nwee mkparịta ụka dabara adaba banyere nyocha ahụ.
Ọ pụtaghị na a ga-enyocha gị maka ọrịa cancer prostate, mana dọkịta ahụ ga - ejegharị gị site na ihe ọma nke ule ahụ na ikekwe nyocha nke ule ahụ. Mbufo mbiba ẹkeme ndibiere m̀m to ikpakaha m̀m or ididaha. Achọghị m ka ụmụ okorobịa leghara ya anya na nke mbụ.
Maka ọtụtụ akụkụ, anyị na-achọta ihe ndị a tupu ụbọchị ndị a ma enwere ike ịhazi ya kpamkpam. Kedu afọ anyị na-ekwu maka ebe a? Kedu afọ ị kwesịrị ichegbu onwe gị? Enwere m ekele na enwere ike bụrụ ihe atụ dị egwu nke ị maara, ikpe mbụ, mana ị ziri ezi.
Ya mere, na nke m na omume m, enwere m foto gbagọrọ agbagọ. Ya mere, anyị nwere nnukwu ọrụ dị otú a na ị ga-enwe ndị ọrịa site na 30 ruo 80 na 90s na-eche banyere ya, ma ọ bụrụ na ị nwere ihe mgbaàmà ọ bụla na-echegbu onwe gị, atụla ụjọ, etinyela isi na ájá ma duzie na nyocha nke ihe nsogbu ahụ bụ, ọ bụrụ na enwere akara uhie ọ bụla iji mee ihe ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Yabụ enweghị njikọ dị n'etiti ịgba ịnyịnya na ọrịa cancer prostate, mana ọrịa prostate bụ nnukwu ihe maka nnukwu akụkụ nke ndị na-agba ịnyịnya Nsogbu naanị n'ihi na ha bụ ụmụ nwoke, ha emeela agadi, n'ihi ya kwa, ha kwesịrị ichebara ya echiche nke ọma Amaghị m gbasara gị ma ihe kachasị m mkpa site na mkparịta ụka a mụ na Anthony bụ na anyị nwere ike ghara iji ahụike anyị gwurie egwu, anyị ga-eche ọnwụ nke anyị ihu ma chọọ enyemaka mgbe anyị chọrọ ya n'ihi na anyị anaghị enwe gs bụ nnukwu nsogbu anyị niile ga-eche ihu ugbu a enwere m ike ịfefe ihe ọmụma dị ukwuu mgbe m na-agwa gị gbasara mkpịsị ụkwụ m na ifufe ma enwere m ike n'echiche ahụ ikekwe anyị niile kwesịrị ịnwa inwe otu Mkparịta ụka - yana ndị enyi anyị na klọb na-agba ya ngwụcha izu, ma ọ dịkarịa ala nwee nkata banyere isiokwu a echere m na ọ ga-abụ ebe dị mma ịmalite.
Ugbu a kwa, biko jide n'aka na ọ na-enye m nnukwu mkpịsị aka iji kelee Anthony maka oge ya na ahụmịhe nkekọrịta anyị na anyị, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ isiokwu ọzọ n'otu isiokwu ahụ. Naanị anyị nwere otu na ọwa a ga - enyere gị aka ịzụta ihe ziri ezi maka ị ga - eche nsogbu mbụ nke ntị chiri ihu.
onyinye maka ndi na-anya igwe ugwu
Cycgba ígwè nwere ike ịkpata kansa cancer?
N'ihi natesticular cancer, ụfọdụ ọmụmụ egosiwo njikọ dị n'etitiịgba ígwènakansa, na ụfọdụ enwebeghị.Mkpebi 17 2015
Cycgba ígwè nwere ike iwepụ kansa?
Na ngụkọta, mmadụ 2,430 n’ime ndị ahụ amụrụ nwụrụ, a chọpụtara na 3,748 chọpụtarakansana 1,110 nwere nsogbu obi. Mana, n'oge ọmụmụ ihe ahụ, na-emechi anyaịgba ígwèebipụ ihe ize ndụ nke ọnwụ site na ihe ọ bụla kpatara 41%, omume nkekansasite na 45% na ọrịa obi site na 46%.Eprel 20 2017
Ndi Lance Armstrong nwere oria kansa?
N’October 2, 1996,Lance Armstrongachoputara na testicularkansa. 1 E mesoro ya na n’oge na-adịghị anya ọ laghachiri n’ọkwa dị elu nke ịgba ịnyịnya ígwè ọkachamara, na-emeri Tour of France ihe ndekọ asaa ugboro asaa.
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè nwere nsogbu prostate?
E nwere adịghị ike na-egosi na trauma si igwe kwụ otu ebenwere ikekpasuo iwe nagbueama nwee ike ịbawanye njọ, ma eleghị anya, na-eduga na prostatitis (mbufụt nkegbuea) ma ọ bụ ọrịa pelvic na-adịghị ala ala. Naanị ndị na-agba ịnyịnya ole na olenwetaprostatitis site na ịnya igwe ha.Bọchị 7 2014
Linggba ígwè ọ na-ebute nrụrụ erectile?
Ihe kpatara yaịgba ígwènwere ikekpata EDbụ na oche na-etinye nrụgide oge niile na perineum-mpaghara dị n'etiti akụkụ ahụ na akụkụ ahụ. Nrụgide anwere ikeemerụ akwara ma jiri nwa oge mee ka ọbara gbasaa, nkena-akpatatingling ma ọ bụ ụfụ na amụ na, n'ikpeazụ,ED.
Cycgba ígwè nwere ike imebi bọọlụ gị?
Mgbendị na-agba ígwèna-agbakwa nnukwu ihe egwu nke testicularmmebina arụ ọrụ testicular arụ. 'Abrasions, na-eri nri,mebiri emebiNgwunye ntutu na ọnya so naihekachasị traumaticịgba ígwèmmerụ ahụ. Iju mmiri na mpaghara anwere ikena-akpatakwa ọrịa na akpụkpọ anụ. 'Jul 9 2008 r.
Linggba ígwè ọ dị njọ maka ụmụ nwoke?
N'ihi namana, uru ahụike nkena-agba ọsọnwere ike ịgụnye ịzụ ahịa na-eweta nsogbu. Mgbe na-agba ịnyịnya aigweBurns calories na mma mma obi, ọtụtụ awa na aigwesadulu nwere ike mpikota onu akwara na irighiri akwara na-eduga na amụ. Nsonazụ ahụ? Ihe ize ndụ nke ụfụ, mgbu, na nrụrụ erectile.Sep 11 2007
Cycgba ígwè ọ na-egbochi ọrịa obi?
Mgbeịgba ígwèna-akpali ma mma gịobi, akpa ume na mgbasa, na-ebelata ihe ize ndụ gịọrịa obi.Cygba ígwèna-ewusi gịobimọzụlụ, na-ebelata izu ike izu ike ma na-ebelata ogo abụba ọbara.
Gini mere eji eme igwe na chemotherapy?
N'izugbe,ọgwụa na-enye ọgwụgwọ na usoro ihe omume. Nke a na-enye ohere ịwakpo mkpụrụ ndụ cancer n'oge oge ha kachasị emetụta, ma na-enye ohere ka sel nke anụ ahụ nwee oge iji gbakee na mmebi ahụ.